बैंकहरु अब हप्ताको तीन दिनमात्रै खुल्ने ! | Butwal Dainik
बैंकहरु अब हप्ताको तीन दिनमात्रै खुल्ने !
बैतडी, भदाै १ । बैतडीमा भदौ ४ लागू हुनेगरि दुई साताका लागि लकडाउन गरिएको छ । सदरमुकामस्थित दशरथचन्द नगरपालिकाले संक्रमण बढ्दै गएपछि दुई साताका लागि लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
लकडाउन अवधिका अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय भएको नगरप्रमुख नरेन्द्रसिंह थापाले जानकारी दिए । लकडाउनमा नगर क्षेत्रभित्र औषधि पसल, एम्बुलेन्स र अत्यावश्यक सवारी साध मात्रै सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको छ ।
नगर क्षेत्रभित्रका बैंकहरुलाई आइतबार, मंगलबार र बिहीबार हप्ताको तीन दिनमात्रै खुला राख्ने निर्णय भएको छ ।
गौरापर्वलाई मध्यनजर गरी दैनिक उपभोग्य सामग्रीका पसल, सिलाई पसल र कपडा पसलहरु बिहान ७ देखि १० बजेसम्म र साँझ ४ बजेदेखि ६ बजेसम्म मात्रै खुला राख्ने निर्णय गरिएको छ ।
यस्तै, धार्मिक स्थलहरुमा नित्य पूजाबाहेक भीडभाड हुने खालका सबै जात्रा,मेला स्थगित गरिएका छन् । चाडपर्वहरू आफ्नै घरभित्रै मनाउन आग्रह गरिएको छ ।
नगर क्षेत्रभित्र सबै प्रकारका भेला, गोष्ठी, तालिम, बैठक र सेमिनारहरूमा रोक लगाइएको नगरपालिकाले प्रकाशित गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। नगरपालिका र ११ वटै वडा कार्यालयहरूले अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।